Sawiro: Farmaajo oo kulan deg deg ah la yeeshay Taliyaasha Ciidamada si wax looga waydiiyo Weerarkii Hotel Sahafi | SMC
Home WARARKA MAANTA Sawiro: Farmaajo oo kulan deg deg ah la yeeshay Taliyaasha Ciidamada si...
Sawiro: Farmaajo oo kulan deg deg ah la yeeshay Taliyaasha Ciidamada si wax looga waydiiyo Weerarkii Hotel Sahafi
Muqdisho (SMC Online) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Shalay dalka dib ugu soo laabtay ayaa kulan deg deg ah waxa uu Xarunta Madaxtooyada kula qaatay Saraakiisha kala duwan ee Ciidamada Qalabka sida.
Madaxweynaha ayaa saraakiisha uu kulanka la qaatay waxaa ka mid ah taliyeyaasha Ciidamada,Millateriga,Booliska iyo asluubta,waxana uu kala hadlay xaalada amni ee dalka iyo qaraxyadii u dambeeyay ee ka dhacay Magalada Muqdishi.
Taliyeyaasha ayuu Madaxweyne Farmaajo wuxuu faray in ay si dhakhso ah ula yimaadaan warbixin dhammeystiran oo ku saabsan amniga iyo qaraxyadii dhacay maalintii Jimcaha aheyd ee la soo dhaafay.
Weerarkii ismiidaaminta ku bilaawday ee lagu qaaday Hotelka Saxafi ee Muqdisho ayaa waxaa mas’uuliyadiisa sheegtay Al-Shabaab,waxaana ku geeriyooday dad u badan Shacab.
Inta la xaqiijiyey illaa 40 ayaa ku dhimatay weerarkaas tiro intaas ka badana way ku dhaawacantay, waxaana sidoo kale banaanka hore ee Hotelka lagu toogtay dableydii weerarka soo qaaday.
Hoteelada ku yaal Magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey amaankooda, waxaana soo wajahday cabsi xooggan kadib markii seddex qarax lagu weeraray hal Hotel taasoo muujineyso halka uu gaarsiisan yahay colaada ay Al-Shabaab kula jirto Hoteelada ay jiiftaan Madaxda Dowladda.
Previous articleShirka iskaashiga ee dalalka Soomaaliya, Ereteriya iyo Itoobiya oo la qorsheeyey in uu ku qabsoomo Muqdisho
Next articleSawiro:-Xildhibaan Sharrif Maxamed Cabdalla Oo Baydhabo Gaarey